Hụnanya na Alụmdi na Nwunye - The Agency Version | Martech Zone
Agencylọ ọrụ anyị, Highbridge, anọwo na ihe karịrị afọ 5 ugbu a ma kwupụta ngbanwe nke trajectory na nso nso a. N'afọ gara aga, anyị rutere ndị ọrụ anyị n'ezie ma mesịa were ọtụtụ ndị ahịa siri ike nke fọrọ nke nta dugara anyị nwụọ.
Anyị ejirila ndị ahịa dị ịtụnanya wulite mmekọrịta dị ịtụnanya - ọtụtụ n’ime ha nọnyeere anyị ọtụtụ afọ. Anyị hụrụ ha n’anya ma nwee olile anya na ha hụrụ anyị n'anya - ọ bụghị naanị ụgwọ ọnwa, ọ bụ agụụ anyị. Ọ dịghị ihe na-eme anyị obi ụtọ karịa ịhụ ka ndị ahịa anyị na-aga nke ọma, ọ dịghịkwa ihe na-ewe iwe karịa mgbe mmekọrịta ahụ na-aga n’ihu.
M na-etinye ihe ndị ọzọ oge ugbu a na-arụ ọrụ na atụmanya iji hụ na anyị na-ma na-kwara na a oké alụmdi na nwunye ha abụọ na-achọkwa mmekọrịta ịhụnanya. Achọrọ m izere ịbanye na mmekọrịta nwere nsogbu n'ọnọdụ niile - n'agbanyeghị oke njikọ ahụ. Mmekọrịta dị njọ anaghị emejọ onye ahịa gị ọ bụla - ọ nwere ike ibutere ndị ahịa gị niile nsogbu dị ka oge na ume gị gwụchara ịnwa ịchekwa nsogbu ahụ. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịchọpụta ụfọdụ njirimara ndị ahịa na-enye nsogbu na usoro ahịa, ọ nwere ike ịchekwa anyị niile nke obi mgbawa n'okporo ụzọ.
Anyi choro inwe obi uto ma tinye oge ufodu n’oge ndi a… ya mere ihe omuma a na-edeputa ihe omuma atu nke udi nmekorita nke anyi, n’ di nwute na anyi aghaghi isi na ya pụọ! Na-ewebata Lovehụnanya na Alụmdi na Nwunye - The Agency Version.
Tags: gị n'ụlọngaahịaịhụnanya na alụmdi na nwunyealụmdi na nwunyemmekọrịta
Ehee! Anọ m na-eche nke ahụ! Obi dị m ụtọ ịhụ ka o mechara pụta maka ikiri ọha! Na-egbuke egbuke!
Echere m na mụ na ole na ole n'ime ndị di na nwunye a nọ, enwere otu ọgwụgwọ dị nso?
Echere m na nke ahụ bụ ihe anyị na-eme kwa izu!
ọ dị mwute na ọ bụkwa eziokwu! Emeela nke ọma, ugbu a, naanị ihe ị ga-eme bụ imepụta ajụjụ nke ndị ahịa nwere ike were were nzacha nke ọma!
Ihunanya na Alụmdi na Nwunye (The Agency Version) – Ọ dị mma! 🙂